Wasiiradda Soomaaliya oo meelmariyey Xeer, Axdi iyo Heshiisyo
Xukuumada KMG ah ee Soomaaliya oo ansixisay Xeer, Axdi iyo Heshiisyo
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha wasiirrada xukuumadda xil-gaarsiinta ayaa maanta kulan ay Muqdisho ku yeesheen waxay ku meel mariyeen Hindise-sharciyeedka dhismaha hey’adda diiwaan gelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed, Hindise Sharciyeedka dhismaha hey’adda dhiirri-gelinta maal-gashiga iyo siyaasadda isbedelka cimilada.
Shirka Golaha ayaa sidoo kale lagu ansixiyay Istaraatiijiyadda dhiirri-gelinta maal-gashiga qaranka, Axdiga jaamacadda Carabta ee la dagaallanka Musuq-maasuqa, heshiiska Iskaashiga arrimaha waxbarashada ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga iyo Heshiiska iska ilaalinta laba jeer canshuuridda iyo kahor tagga la baxsiga canshuuraha saaran dakhliga ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Qatar.
Kulanka oo uu guddoomiyay Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, mudane Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixnta amniga iyo xaaladda waxbarashada dalka.
Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha
Shirka Baydhabo iyo Qodobo la isku mari la'yahay [XOG]
Soomaliya 05.06.2018. 10:53
Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay fulin waayeen qodobada...
Mursal oo War kasoo saarey dilka Khasnajigii Baarlamaanka Soomaaliya
Soomaliya 28.05.2018. 23:53
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo dalbaday baaris madaxbanaan
Soomaliya 26.05.2018. 14:06
Askari saaxiibkiis ku toogtay Muqdisho oo gacanta lagu dhigay
Soomaliya 29.01.2020. 08:10
DFS oo beenisay in shacab lagu dilay weerarkii Afgoye [Dhageyso]
Soomaliya 10.05.2018. 17:48
XFS oo meelmarisay sharciga la dagaalanka burcad-badeeda
Soomaliya 23.01.2020. 17:53
Somaliland: Shaqo kuma lihin doorashooyinka maamulka taagta daran ee Soomaaliya 21.09.2020. 10:55
Farmaajo oo loogu baaqay in uu dib-u-habeyn ku sameeyo taliska NISA 21.09.2020. 07:00
Mas'uuliyiinta HirShabelle oo la siiyey talo ay uga badbaadi karin Al-Shabaab 21.09.2020. 06:45
Xiisada dowladaha Faransiiska iyo Turkiga oo weji cusub yeelatay 21.09.2020. 06:30
Axmed Madoobe oo shaaciyey qodobka Farmaajo u ololeynayey 20.09.2020. 20:25
Amniga doorashooyinka soo aadan ee Soomaaliya oo laga shiray 20.09.2020. 19:00